Umhla wokukhutshwa kwe-iphone 13, ixabiso, amanqaku kunye nokuvuza
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Umhla wokukhutshwa kwe-iPhone 13, ixabiso, amanqaku kunye nokuvuza
Nangona thina & apos zisekhona iinyanga ezimbalwa kude kukhululwe uthotho lwe-iPhone 13, sele kukho uninzi lwamarhe atyhila into esinokuyilindela apile & apos; s 2021 umgca we-smartphone. Apha ngezantsi kukho konke esikwaziyo malunga ne-iPhone 13 ngoku.
Umhla wokukhutshwa kwe-iPhone 13
Ixabiso le-iPhone 13
Igama le-iPhone 13
Ikhamera ye-iPhone 13
Ukugcinwa kwe-iPhone 13
Uyilo lwe-iPhone 13
Ukuboniswa kwe-iPhone 13
Ibhetri ye-iPhone 13
Iimpawu ze-iPhone 13 kunye nesoftware
Ukuvuza okutsha kwe-iPhone 13 (kuhlaziywa mihla le)
U-Apple uxele ukuba uqalile ukwenza ii-odolo zezinto ze-iPhone 13 , Ukuqala kwemveliso yeefowuni kusondele.
Inkqubo ye- I-iPhone 13 Pro kunye nePro Max yeekhamera ze-Ultra ezibanzi ziya kuba ne-autofocus , utshilo ngaphakathi uMing-Chi Kuo.
Umleki wabelane ngefoto yento ekuthiwa yile I-iPhone 13 yeeyunithi zedummy zosapho , bonisa utshintsho oluthile kuyilo lweemodeli zonyaka ophelileyo.
Inqaku le-Shrunken, ikhamera enkulu, kunye noyilo olutsha lwe-iPhone 13 Pro zibonisiwe kwimifanekiso emitsha yemixholo.
Umhlalutyi othembekileyo ucebise ukuba I-Apple inokukhupha i-iPhone 13 ngoSeptemba 24 .
Imveliso ye-iPhone 13 & apos ye-A15 Bionic chip kwathiwa iqalile ngoMeyi.
Ngokomhlalutyi uDan Ives, i-iPhone 13 iya kukhutshwa ngo-Septemba 24, 2021
UMnu Ives usinike imihla ethile - esithi Umnyhadala we-iPhone 13 ucwangciselwe uSeptemba 14 Ngelixa umhla wokukhutshwa kwe-iPhone 13 uyakuba nguSeptemba 24. Le mihla iyaxhaswa yinto yokuba iApple ihlala ibambe umcimbi we-iPhone minyaka le ngoSeptemba.
Ukuphela kwento ebikhe yenziwa kulo nyaka uphelileyo, ngenxa yemiceli mngeni ebingalindelwanga ebiyizise kwimveliso nasekuhanjisweni kweenqanawa, phakathi kwezinye iinkqubo eziphambili ekufuneka zenziwe ziinkampani ukuze zikhuphe imveliso. Okwangoku akukho zimpawu zibonisa ukuba ukukhutshwa kwe-iPhone 13 kuya kulibaziseka.
Malunga ne- $ 799 ye-iPhone 13
Siyayazi loo nto I-Apple ifuna ukwandisa imveliso ye-iPhone e-India kwaye sihambise malunga ne-20% yemveliso ye-iPhone ephuma e-China, kodwa asizukufumana ukuba oku kuyakuba nefuthe kwixabiso lee-iPhones ezizayo. Ukuza kuthi ga ngoku, akukho & apos akukho nto iphakamisa ukuba kufanelekile ukuba silindele utshintsho olukhulu kumaxabiso ee-iPhones ezizayo.
Uthotho lwe-iPhone 13 lunokubiza malunga ne-iPhone 12 uthotho, oluya kulingana namaxabiso alandelayo:
I-iPhone 13 encinci $ 699 I- £ 699
Ifowuni ye-13 $ 799 I- £ 799
IPhone 13 Pro $ 999 I- £ 999
IPhone 13 Pro Max $ 1,099 I- £ 1,099
I-iPhone 13 okanye i-iPhone 12S?
Kucetyisiwe ukuba U-Apple angabiza i-iPhone elandelayo 'i-iPhone 12S' endaweni ye 'iPhone 13', etyholwa ngenxa yayo ebonisa kuphela uphuculo oluncinci kunangaphambili. Inani le-13 likwajongwa njengelishwa kwamanye amazwe, elinokuthi lidlale indima kwisikimu segama lika-Apple.
Nangona kunjalo, okwangoku akukho & apos; akukho lwazi luvulekileyo okanye ulwazi olusemthethweni lokulixhasa eli bango, ngenxa yoko sinokulindela ngokuqinisekileyo ukuba igama lolu ngcelele lube 'yi-iPhone 13'.
Imodyuli yekhamera ye-iPhone 13 inkulu kancinci ngaphezulu kwe-12 (eboniswe apha)
Ngokomhlalutyi uMing-Chi Kuo i-iPhone 13 & apos; ikhamera ye-engile ebanzi iya kuphuculwa ibe yi-f / 1.8, 6P (iilensi ezinamalungu amathandathu). Uye wathi iikhamera ze-ultra-wide ze I-iPhone 13 Pro kunye nePro Max ziya kubandakanya ukujonga ngokuzenzekelayo .
Silindele ukuba imodyuli yekhamera ngokwayo ayizukutshintsha kakhulu, ukuba kunjalo, kwimodyuli ebonwe kwi-iPhone 12 kunye ne-iPhone 11, ngaphandle kokunyuka kancinci kubungakanani. Ngokubhekisele kwiikhamera ngokwazo-ikhamera yokusondeza kunokwenzeka ukuba ibuye, ecaleni kwekhamera ephambili kunye nekhamera ebanzi ekhankanywe apha ngasentla.
NgoDisemba ka-2020, amajelo aseKorea aqinisekisa amarhe okuba I-Apple iya kwenza izixhobo ze-iPhone ze-periscope zoom ukusuka kwi-Samsung. Nangona kunjalo, iziphumo ezivela kule ntsebenziswano zilindeleke ukuba zibonwe kwakamsinya kune-iPhone 14.
NgoJanuwari 9 wama-2021, ingxelo esekwe kulwazi lokuthengwa kwempahla yabanga oko Ukuphuculwa kwekhamera ye-iPhone 13 kunye nokuseta okuhlaziyiweyo kweFaceID kulindeleke. Ukuphuculwa kombuzo kuthiwe kubandakanya ikhamera encinci ye-TrueDepth, enokuthi ikwathetha inotshi encinci ngaphezulu kwesiboniso se-iPhone 13.
Ingxelo kamva (ngoFebruwari 2, 2021) evela kubahlalutyi beBarclays Ukuphuculwa kwekhamera enkulu kwi-Apple kunye ne-apos; yonke i-iPhone 13 yosapho , ngokukodwa ukuphucula amandla ekhamera ye-angle ebanzi. I-iPhone 13, i-iPhone 13 mini, i-13 Pro, kunye ne-13 Pro Max inokufumana i-f / 1.8 yokuvula ikhamera ebanzi, ukusuka kwi-f / 2.4 kuthotho lwe-iPhone 12. Oku bekuxelwe kwangaphambili nguKoo, njengoko kuchaziwe apha ngasentla.
apile inokuzisa uphawu lwe-astrophotography , eziza kuthatha iifoto ezicacileyo zesibhakabhaka ebusuku, kubandakanya iinkwenkwezi kunye nenyanga.
Ukongezwa kwendlela yokurekhodwa kwevidiyo yePortrait kukhankanyiwe ngabavuzayo. Emva kokurekhoda ividiyo yemowudi ye-iPhone Portrait, abasebenzisi kuya kuthiwa banakho ukutshintsha ividiyo kunye ne-apos yobunzulu bentsimi ukuthanda kwabo. Iziphumo ziya kuphazamisa imvelaphi okanye izinto zangaphambili njengokhetho lomsebenzisi.
Zonke iimodeli ze-iPhone 13 ziya kuba nesikena seLiDAR . Ukongeza, i-iPhone 13 Pro Max kunye ne-iPhone 13 mini ziye zavezwa ukuze zibonakale amaqhuma amakhulu ekhamera kunye nezivamvo ezinkulu , esinokuyilindela ngokufanelekileyo ukuba ibe njalo kuzo zonke iimodeli ze-iPhone 13.
Ngokuphathelene nokukhethwa kwe-iPhone 13, kuye kwakho intelekelelo yokuba I-Apple iya kuphinda kabini amandla okugcina aphezulu Ukusukela kunyaka ophelileyo & i-apos; s 512GB ukuya kwi-1TB ye-iPhone 13. Okunye ukuvuza okutsha kutshanje kuthe okungenani Iimodeli ze-iPhone 13 Pro kunye neMax ziya kuba ne-1TB yokugcina ukhetho (Iigigabytes ezili-1 000).
Inotshi iya kuncipha
Utshintsho kuyilo lwe-iPhone 13, eshwankathelwe:
Inotshi incinci ngobubanzi
Imodyuli yekhamera inkulu kancinci
Ukucwangciswa kwekhamera kuhambelana kwi-iPhone 13 kunye neemodeli ezincinci
Zonke iimodeli zimalunga ne-0.26mm ubukhulu
Kwithotho ye-iPhone 13 silindele into encinci, kodwa isekhona inotshi kunye noyilo olufana ncam njengakwimodeli yonyaka ophelileyo.
Ekupheleni kuka-Matshi, kuye kwavela ukuvuza Iiphaneli zeglasi ezili-13 kutyhilwe ukuba inotshi ye-iPhone 13 inokubakho incinci, ubuncinci ububanzi. Ukuxhasa oku, ngo-Epreli Ukuvuza kuthiwe kubonisa i-iPhone 13 mini CAD render Ikwabonakalise iifowuni ezinotshi encinci kunye nokuma okwahlukileyo kweekhamera zabo zangasemva.
Le yindlela umboniso we-iPhone 13 kunye ne-apos; izakubonakala ngayo, ukuba ukuvuza okukhankanywe apha ngasentla ukusukela ngoMatshi kuchanekile
Phakathi ku-Februwari, Ama-leaker athi i-iPhone 13 izakufumana i-grippier, ethe kratya ethe kratya ebhalwe umyalezo , eya kuba lula ngakumbi ukuyibamba. Ngaphakathi kwi-iPhone 13, iimagnethi ezinamandla ziya kusetyenziselwa izixhobo zeMagSafe.
Ingxelo yangaphambili, ekhankanywe ngaphambili ukusuka kuJanuwari 9 yatsho Zonke i-iPhone 13 ezahlukeneyo ziya ziba nkulu nge-0.26mm, kusenokwenzeka ngenxa yabo yokufumana iibhetri ezinkulu kunesizukulwana esidlulileyo se-iPhones.
NgoJanuwari 15th, a Bloomberg ingxelo yacebisa ukuba I-iPhone 13 ekugqibeleni iya kufumana inzwa yokubonisa iminwe ye-ID . Sinee-apos; sibonakalise ii-sensors kwiifowuni ze-Android okwethutyana kwaye siqwalasele inyani yokuba uninzi lunxibe iimaski kwaye ngenxa yoko lufumana i-ID yobuso inzima ngoku, ukubuya kwe-ID yeTouch, kodwa yenziwe yanamhlanje ye-2021, kubonakala kufanelekile. Nangona kunjalo, kukho & apos; into enokwenzeka ukuba inqaku elinokubambezeleka kuthotho lwe-iPhone 14 endaweni yoko.
Iingcebiso ezininzi ziye zacebisa ukuba i-iPhone 13 ibe yi-iPhone yokuqala engenasiphelo, exhomekeke kuphela ekutshajiseni ngaphandle kwamacingo ngeMagSafe. Ekupheleni kukaFebruwari, kwavezwa ukuba i-Apple iyavavanya ngokwenene indlela i-iPhone engafakwanga enokufumana ngayo idatha , ucebisa ukuba i-iPhone enjalo iza ekugqibeleni.
Ngo-Epreli 13, ukuvuza kwe-iPhone 13 5G kubonise inotshi encinci kwakhona. Ngaphakathi kwenotshi, izinzwa zabonakala zilungelelaniswe kancinci, kwaye kukho ukusikwa kwesine okunokuthi kube sisithethi esongezelelweyo okanye ikhamera yesibini engaphambili.
NgoJuni 23, 2021, leaker SonnyDickson ithunyelwe ku-Twitter le foto ilandelayo ye-iPhone 13 yeemodeli zedummy, ebonisa umqolo wabo.
Ezi modeli ze-iPhone 13 zedummy zihambelana nokuvuza kwangaphambili zibonisa ukuba iifowuni ziya kuba neemodyuli ezinkulu zekhamera kunyaka ophelileyo. Kananjalo isiseko se-iPhone 13 kunye ne-iPhone 13 mini ziboniswa kwimidlalo ulungelelwaniso oluhlengahlengisiweyo lweekhamera zabo.
Abanye abacebisi bacebise ukuba uthotho lwe-iPhone 13 lunokudlala bhetyebhetye Imiboniso ye-OLED endaweni yeLCD. Kukwakho nokulindelweyo kwimiboniso ye-iPhone 13 & apos ukuba nenqanaba lokuhlaziya elincomekayo eli-120Hz (elifana neProMotion kwi-iPad Pro), eyayingafumaneki kuthotho lwe-iPhone 12. ixelwe ngenxa yexhala lobomi bebhetri .
Ukuvuza okuku-Disemba 2020 kucetyise ukuba I-iPhone 13 ekugqibeleni inokufumana ukuboniswa rhoqo uphawu. I-LTPO esoloko iboniswa nayo iphinde yaqinisekiswa kamva Kwingxelo kaFebruwari 2021 ngabaphengululi uMax Weinbach noJon Prosser. Indawo ekuboniswa kuyo rhoqo kuthiwa inezinto ezinokwenziwa ngokwezifiso ezincinci. Iya kubonisa iwotshi, kunye nentlawulo yebhetri, ngelixa izaziso zixeliwe & iiapos; zibonisiwe kusetyenziswa ibar kunye nee icon '.
Kwiimodeli ze-iPhone Pro kunye nePro Max, imiboniso kulindeleke ukuba ibonelelwe yenye ngaphandle kweSamsung. Ekupheleni kuka-Matshi ka-2021, i-120Hz LTPO Imiboniso evela kwi-Samsung yenzelwe i-iPhone 13 bebeza kungena kwimveliso, ngokutsho koPhando lwe-UBI.
Kwaye ngasekupheleni kukaMeyi, Isamsung kwathiwa ikhaba imveliso ye-iPhone 13 Pro & apos; s 120Hz boniso . Ezo ziboniso zeProMotion ziya kusetyenziswa kwi-iPhone 13 Pro kunye ne-iPhone 13 Pro Max kuphela. Ngokuphathelele i-iPhone 13 mini kunye ne-iPhone 13, i-LG yiyo eya kubonelela nge-Apple ngeepaneli zepremiyamu ezingama-60Hz.
Ngokubhekisele kubungakanani bokubonisa i-iPhone 13, ngokwe Amarhe okuqala e-iPhone 13 Singalindela ukuba uthotho lwe-iPhone 13 luza kusondela kakhulu kuthotho lwe-iPhone 12. Izinto ezinokwenzeka zibandakanya ubungakanani bokubonisa obufanayo okanye ezikhulu kakhulu, ngenxa yokuncipha kwee-bezels. Oku kuthetha ukuba ubuncinci sinokulindela obu bukhulu be-iPhone 13 ilandelayo:
I-iPhone 13 encinci-Umboniso we-5.4-intshi kwisisombululo se-pixels ezingama-1080 x 2340 (476 PPI, 60Hz)
Ifowuni ye-13-Isibonisi se-6.1-intshi kwisisombululo seepikseli eziyi-1170 x 2532 (460 PPI, 60Hz)
IPhone 13 Pro-Isibonisi se-6.1-intshi kwisisombululo seepikseli eziyi-1170 x 2532 (460 PPI, 120Hz, OLED)
IPhone 13 Pro Max-Umboniso we-6.7-intshi kwisisombululo se-pixels eziyi-1284 x 2778 (458 PPI, 120Hz, OLED)
Umhlalutyi othembekileyo uMing-Chi Kuo uthe iApple ikhulule indawo ebonakalayo emzimbeni we-iPhone 13 & apos; Uthotho lwe-iPhone 13 lunokuba neebhetri ezinkulu . Ukongeza, i-iPhone 13 & apos; s Chip ye-A15 yeBionic inokuba namandla ngakumbi kune-iPhone 12 kunye neeapos A14, ezinokongeza ekusebenzeni okungcono kwebhetri.
Kwasekuqaleni kukaJuni, kwatyhilwa ukuba I-iPhone 13 yoluhlu lwebhetri yonyuswe ngaphezulu kwe-iPhone 12.
Ngokwokuvuza okutsha, ubungakanani bebhetri ye-iPhone 13 iya kuba:
I-iPhone 13 encinci-2,406 mAh
Ifowuni ye-13-3,095 mAh
IPhone 13 Pro-3,095 mAh
Ukujonga kwakhona, obu bubungakanani bebhetri bonyaka ophelileyo kunye neeapos zeemodeli ze-iPhone 12:
I-iPhone 12 encinci-I-2,227 mAh
Ifowuni ye-12-I-2,815 mAh
IPhone 12 Pro-I-2,815 mAh
IPhone 12 Pro Max-3,687 mAh
Unokufumana uluncedo ekuzinikeleni kwethu I-iPhone 13 yebhetri evuzayo inqaku.
I-iPhone etshaja ngaphandle kwamacingo ngetshaja yeMagSafe It & apos iqinisekile ukuba i-iPhone 13 iya kuba nenkxaso ye5G. Ngaphakathi, uthotho lwe-iPhone 13 luza kuxhotyiswa yi-Apple A15 Bionic chip.
Ukuvulwa kweminwe kulindeleke ukuba kubuyele kwezinye iimodeli ze-iPhone ze-14 ngohlobo lwe Iscreen seTouch ID . Olu qikelelo luvela kuMing-Chi Kuo, kodwa asizukubona ubungqina obuqinisekileyo bokubuya kwe-ID kunye neapos ngeli xesha. Ngokubhekisele kwi-iPhone 13, okwangoku uninzi lwentelekelelo lukhokelela ekubeni ibe ne-ID yobuso kuphela, kodwa ukubakho kwe-ID yokuChukumisa, nangona incinci, ayisiyo mbuzo okwangoku.
Ngokubhekisele kwisoftware, i-iPhone 13 izakusebenzisa i-iOS 15, eza kuzo zonke ii-iPhones ezifanelekileyo ukuwa oku, mhlawumbi ngoSeptemba, njengeenguqulelo ezininzi ze-iOS zangaphambili. I-iOS 15 izisa uhlaziyo lwe-FaceTime, iindlela zoJoliso, iZibhalo eziBukhoma, uyilo ngokutsha lweSafari kunye nezinye izinto onokuzijonga kuthi Imboniso ye-iOS 15 .
Ngaba kufuneka ndilinde i-iPhone 13?
Ngaba uyazibuza ukuba ingaba i-iPhone 13 iya kulunga na? Masizame ukuphendula ukuba ngaba ulinde i-iPhone 13 okanye ubambelele kolunye lonyaka ophelileyo kunye neemodeli.
Yintoni oya kuyifumana ngokuphucula ukuya kwi-iPhone 13:
Umboniso we-120Hz ProMotion OLED (kwiPro kunye nePro Max)
Izinketho ezinkulu zokugcina
Iimpawu ezintsha zekhamera
Kuya kufuneka ulinde i-iPhone 13 ukubauyayixabisa into ezisa kwitafile ngaphezulu kwesizukulwana esidlulileyo. Ngokukodwa, iikhamera ezingcono ezine-angle-autofocus ebanzi, isibonakaliso seProMotion esilula kakhulu se-120Hz, kunye nokusebenza kobomi bebhetri. Wena & apos; uyakufumana ubungqina obuninzi ngekamva le-5G yefowuni. Ukuba konke oku kuvakala kulungile, ngokuqinisekileyo iiapos kufuneka ziphuculwe kuthotho lwe-iPhone 13.
Uthotho olutsha lwe-iPhone 13 luya kuzisa neendawo zokugcina ezinkulu, ezichaziweyo ukuya kuthi ga kwi-1TB (iigigabytes ezili-1). Ke, ukuba wena & apos; ngoku uhlala uzifumana kufuneka ucoce ugcino kwi-iPhone yakho, ukuphucula ukuya kwi-iPhone 13 kunye nokusebenzisa amandla ayo aphezulu okugcina ngokuqinisekileyo kuya kuba kufanelekile.
Akufanele ulinde i-iPhone 13 ukubaAkukho nto siyichazileyo ukuza kuthi ga ngoku ekuvuyisile. Uthotho lwe-iPhone 13 ngokuqinisekileyo ayisiyiyo & apos; ayilulo uphuculo oluphambili kunangaphambili, ngenxa yoko ukusebenzisa imodeli eyi-12 komnye unyaka kulungile. Silindele ukuphuculwa okukhulu konyaka ozayo kunye ne-apos ye-iPhone 14, ke unokufuna ukubambelela kwi-iPhone yakho yangoku komnye unyaka kwaye uphucule kuphela xa iApple yazisa into entsha oyifumanayo inika umdla. Ukongeza, ukuba unayo i-iPhone endala, Nazi izizathu zokuba kutheni kufuneka ucinge kwakhona ngokuthenga i-iPhone 12 .
Zingakanani ii-airpods pro
ukuba imeko kwiskripthi seShell
Iphepha leNqaku leModeli yeSakhelo ngeJava kunye neWebDriver
IMicrosoft ikuvumela ukuba usebenzise ii -apps ze-Android Windows 10
Ixabiso leGoogle Nexus 5X kunye nomhla wokukhutshwa e-US, UK nase-EU
I-T-Mobile ilungiselela ukunyuka kwexabiso (mhlawumbi) elingenanto yakwenza nokudityaniswa kweSprint
I-Apple ithatha inyathelo lokuvala iivenkile ezininzi zase-US emva kokuphanga